Ungalutshintsha njani uLwimi kuTwitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Utshintsha njani ulwimi kwi-twitter?
Epreli 26, 2021 0 IiCententarios 294
I-Twitter ngaphandle komkhondo wamathandabuzo, unxibelelwano phakathi kwabantu kunye neendlela ezimbini zonxibelelwano kunye neqonga lonxibelelwano ngokugqwesa. Ngendlela yayo "tweet", ifumene ukuthembakala kwabasebenzisi abazizigidi ezingama-393 ngokweenkcukacha-manani ezisemthethweni.
Ke ngoko, inethiwekhi yokuncokola yenethiwekhi yeqonga liqonga lonxibelelwano labantu, Oko kukuthi, izigidi zabantu kwihlabathi liphela bayayifumana yonke imihla kuyo nayiphi na isixhobo, njengekhompyuter yedesktop, iselfowuni okanye iThebhulethi.
Oku kwenza ukuba uthungelwano lwe-ser lufumaneke kuzo zonke iilwimi zeplanethi. Ndiyabulela kwisidingo esikhoyo sonxibelelwano esinabantu, efuna ukususwa kwemiqobo yolwimi ukuze ukwazi ukunxibelelana naye nawuphi na umsebenzisi we-twitter.
Ziqhelanise nolwimi nge-twitter
Kuyenzeka ukuba, ngaxa lithile, ube unomdla wokuziqhelanisa nolwimi ukuba uyafunda, kwaye ufuna ukuba iakhawunti yakho ikule nto, ukuze ukwazi ukuziqhelanisa nayo kwaye uqhelane namagama aqhelekileyo kule nethiwekhi.
Ngokubanzi, xa kwenziwa iakhawunti ye-Twitter, ujongano luguqulelwa ngokuzenzekelayo kulwimi lwelizwe apho umsebenzisi osandula ukubhalisa abekwe khona. Kwaye siyabulela kukwanda kokuthandwa kwale nethiwekhi sinethuba lokonwabela iprofayili kwiilwimi ezahlukeneyo ezingama-48 zizonke eziya kuthi zilungele uninzi lwamalungu.
Ke ngoko, kunokwenzeka ukuba kwezinye iimeko, ufuna ukutshintsha ulwimi lweakhawunti yakho kwi-twitter, kunokwenzeka ukufezekisa oku ngothotho lwamanyathelo alula kakhulu.
Uya phi kwiakhawunti yakho ye-twitter ukutshintsha ulwimi?
Into yokuqala ekufuneka uyenzile, ewe, ungene kwiphepha le-twitter okanye usetyenziso. Ungangena kwi-twitter kuso nasiphi na isikhangeli, njengeChannel, Firefox okanye iSafari. Ukusuka ekukhanyeni okanye ekusebenziseni ngokupheleleyo i-Smartphone yakho.
Nje ukuba kwenziwe oku, kuya kufuneka uye kwi icon yeprofayile yakho kwaye uyicinezele. Uya kubona ngoko nangoko ukuba i-tab iyaboniswa.
Kule thebhu okanye kwimenyu uza kufumana uthotho lwamacandelo. Ukutshintsha ulwimi kufuneka uye kulowo uthi "useto kunye nemfihlo". Ngokucofa eli candelo, icandelo loqwalaselo lweakhawunti liya kubonakala kamva.
Apho uya kubona ukhetho lweelwimi ezininzi. Khetha enye oyithandayo. Okulandelayo, kuya kufuneka ugcine ukhetho lwakho, kwi-icon engezantsi ethi "gcina".
Ukutshintsha ulwimi, kuya kufuneka ufake ipassword yakho. Ukuze i-twitter iqinisekise ukuba ngumsebenzisi osemthethweni ocela utshintsho lolwimi. Emva koko ucofa ugcino lotshintsho ukuqinisekisa isicelo.
Iinyani zokuzonwabisa ezivela kwi-twitter
Nokuba sithini na isicwangciso sakho, ukuba uyakwazi ukunyusa inani labalandeli bakho ngestratospheric, Uya kuba nakho ukutsala umdla weempawu ezifuna ukunyuselwa.
Ukuba uphuhlisa ibhlog, Ukwabelana ngedilesi yakho kwi-twitter kunokufumana ukutyelelwa okuninzi kwaye, ke ngoko, ukugcwala okuphezulu kakhulu kuyo.
Inqaku elinomdla malunga ne-twitter kukuba unokuguqulela ujongano lwakho lube yiLolcatz, ulwimi lweekati. Ngokuqinisekileyo, yintlekisa ye-twitter.
1 Ziqhelanise nolwimi nge-twitter
2 Uya phi kwiakhawunti yakho ye-twitter ukutshintsha ulwimi?
3 Iinyani zokuzonwabisa ezivela kwi-twitter
Epreli 26, 2021
Uyifumana njani imenyu eyimfihlo yeTelegram
Ndingasusa njani iphepha lam likaFacebook?